Ukuvuka: Iwebhusayithi ethokozisayo nokunyakaza kweSoftware yamahhala | Kusuka kuLinux
Ukuvuka: Iwebhusayithi ethakazelisayo nokunyakaza kweSoftware yamahhala
Ukufaka kwe-Linux Post | 03/09/2021 06:00 | Okunye, eziningana
Ngezikhathi ezithile, ngaphezu kwe izindaba noma okokufundisa mayelana nezinhlelo zokusebenza, imidlalo nezinhlelo, sivame ukuhlola amawebhusayithi awusizo futhi athakazelisayo avame ukunikela izinsizakalo zamahhala nezitholakalayo, futhi lokho futhi kubambe iqhaza elibonakalayo ku Ukunyakaza kwamahhala kweSoftware. Ngakho-ke namuhla, lokhu okuthunyelwe kunikezelwe kuwebhusayithi ebizwa "Vuka".
"Vuka" okwamanje yiwebhusayithi enikezela amathuluzi wokuxhumana online yabantu namaqembu asebenza kufayela le- ushintsho kwezenhlalo. Ngaphezu kwalokho, zingumsebenzi ohlose ukuwenza dala ezinye izindlela zentando yeningi y sebenzisa ukuzilawula ngokulawula imidiya yabo.
Ngaphambi kokuntywila esihlokweni se- "Vuka", kubalulekile ukuthi uqaphele, phakathi kwabanye amawebhusayithi noma amapulatifomu aku-inthanethi okuthakazelisayo okuka imiphakathi yesoftware yamahhala noma ukunyakaza, sesike sahlola abanye abanye ngaphambilini okuthunyelwe okuhlobene. Ngakho-ke, sizoshiya ngokushesha izixhumanisi ezilandelayo ngezansi, ukuze kuthi uma kunesidingo zihlolwe ngemuva kokuqeda ukufunda le ncwadi yamanje:
"NOGAFAM: Yisiza sfuthi wenze ukuphakamisa isibhakela sakhe emoyeni!, waqeda lobu bukhosi bezobuchwepheshe obambalwa, futhi wasekela abantu nezinkampani zasendaweni ukuthi baphinde bakwazi ukulawula idatha abayikhiqizayo, ukuphakamisa izixazululo eziningi nezinye izindlela zeService / Software ezizokwenza impilo yethu elula futhi eqhubekayo, emphakathini nakwezomnotho." I-NoGAFAM: Iwebhusayithi ethokozisayo nokunyakaza kweSoftware Emahhala
IDisroot: Ipulatifomu yamahhala, yangasese nephephile yamasevisi aku-inthanethi
1 Ukuvuka: Ukunyakaza kwamahhala kwesoftware
1.1 Kuyini ukuphakama?
1.2 Umnikelo ku-Free Software
Ukuvuka: Ukunyakaza kwamahhala kwesoftware
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni wephrojekthi kanye nokunyakaza / ngokuhlanganyela, kuchazwa njenge:
"Iwebhusayithi efuna ukuhlinzeka ngamathuluzi wokuxhumana akwi-inthanethi wabantu namaqembu asebenzela ushintsho kwezenhlalo lwe-libertarian. Iphrojekthi yokwakha ezinye izindlela zentando yeningi nokusebenzisa ukuzilawula ngokulawula imithombo yethu yezindaba. Inhloso yenhlangano yethu ukudala umphakathi okhululekile ohlelwe ngaphansi kwale migomo elandelayo: Intando yeningi, Ukulingana, Ukwehlukahlukana, Ezokuphepha, Ubuciko, Ukuzimela, Ukuzimela, Ubulungiswa, Ukuthula, Imvelo kanye Nomnotho."
Ngaphezu kwalokho, yabo abalondolozi banezela ukuthi:
"URiseup usebenza ngokungakhathali ukudala ubuchwepheshe obuphansi obubhekela izidingo zokuxhumana zabantu nezinhlangano ezisebenzela ushintsho kwezenhlalo. Uma uthola insizakalo evela enkampanini engakukhokhisi, kungenzeka ukuthi bazothola imali yokukubuka kakhulu. Ukuvuka, ngakolunye uhlangothi, kuya ngeminikelo yabasebenzisi bayo, abanjengawe, abakholelwa ekugcineni ezinye izindlela zentando yeningi."
Umnikelo ku-Free Software
"Vuka" uchaza ukuthi ngelebhu yakhe, "Amalebhu Okuphakama", unikela ngenkuthalo ku Ukunyakaza kwamahhala kweSoftware. Njengoba, ikubheka njengengxenye yenzuzo evamile yedijithali yokusetshenziswa kwethu sonke.
Iminikelo eyenziwe kwi-Free Software ifaka okulandelayo:
Ukuphepha kanye nezimagqabhagqabha zobumfihlo: Kubandakanya izinhlobo zakho zezinhlelo zokungena ngemvume, ezokuthutha ngeposi, i-webmail, namathuluzi adumile wokubamba iwebhu.
I-Crabgrass: Umthombo ovulekile wohlelo lokusebenza lewebhu olwenzelwe ukuxhumana nabantu, ukusebenzisana kweqembu kanye nenhlangano ebonakalayo. Inhloso yethu ukudala amathuluzi wokuxhumana enzelwe ukuhlangabezana nezidingo zenhlangano yakho eyisisekelo.
Isipeleninja: Isethi yamathuluzi ethandwayo enikeza indlela eyodwa yokumisa nokuhlela izinsiza zokulondoloza ezahlukahlukene.
IMonkeysphere: Ithuluzi lesoftware elikuvumela ukuthi usebenzise i-OpenPGP web of trust ukuqinisekisa ukuxhumana kwe-ssh. Ngaphezu kwalokho, kuyindawo esebenzisa i-OpenPGP web of trust ukwenza imisebenzi ye-PKI.
Ipipi: Ukwakhiwa kwamamojula ahlukahlukene wePuppet, okuyithuluzi elinamandla lokuphatha ukumiswa elibhalwe kuRuby, ipulatifomu evulekile futhi evulekile.
I-Debian grimoire: Ukwenziwa kwezifundo ngesinyathelo ngesinyathelo futhi kwashicilelwa kuwebhusayithi yakho, ngenhloso yokusiza ezinye izinhlangano zilwe nobuchwepheshe obuyinkimbinkimbi bemithombo evulekile, ikakhulukazi ekunyakazeni emazingeni aphansi nasezenzweni eziqondile.
I-Debian GNU / Linux: Amalungu amaningana eqoqo leRiseup angonjiniyela abakhuthele beDebian (okuwukuphela kokusabalalisa okukhulu okwenzelwe inzuzo).
Ngeminye imininingwane mayelana ne- amaphrojekthi, izinsizakalo kanye neminikelo ku-Free Software vakashela okulandelayo isixhumanisi. Futhi khumbula ukubasekela ngokubasakaza futhi ukunikela, ukuze bakwazi ukuqhubeka nokufaka isandla bexhasa i-Free Software, Open Source ne-GNU / Linux.
Futhi ekugcineni sincoma ukuthi uhlole le ncwadi yokugcina edlule ebizwa nge- «Hlukanisa i-Intanethi ngokweqile: Amanethiwekhi asetshenzisiwe kanye namaseva azimele»Lapho besesivele sishilo khona "Vuka" kanye namanye amaphrojekthi afanayo, ngokwemigomo ye- Amaseva azimele noma aphethwe nguwe.
Ngokufingqa, "Vuka" Kuyinto a iwebhusayithi ethakazelisayo, ewusizo nehlukile ukuphatha nokuboleka inani elihle kakhulu le- izinsizakalo zamahhala nezitholakalayo, nalokho futhi inikela ngenkuthalo ekuhambeni kwe-Free Software. Futhi-ke, ingabhekwa njengewebhusayithi enhle kakhulu, ikakhulukazi kulabo bethu abasekela i-Free Software, Open Source ne-GNU / Linux.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Ukuvuka: Iwebhusayithi ethakazelisayo nokunyakaza kweSoftware yamahhala
I-InviZible Pro: Uhlelo lokusebenza lwe-Android lobumfihlo nokuvikeleka ku-inthanethi